Plaform | Game News for Myanmar
​မြွေတစ်ကောင်အနေနဲ့ ကစားရမယ့် Snake Pass (puzzle/platformer) ဂိမ်း
February 21, 2017 February 21, 2017 frosblaze Game, News, Nintendo Switch, PC, Plaform, PS4, Puzzle, Upcoming, Xbox One	kid games
သင်ဟာ မြွေတစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့လျှင် အခက်အခဲတွေကို ဘယ်လိုကျော်လွှားမလဲ?
ငြိမ်းချမ်းလှတဲ့ Haven Tor ကြီးဟာ ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေရဲ့ နှောင့်ယှက်ခြင်းခံရပြီး ဂေဟစနစ် ပျက်ယွင်းသွားပါတယ် ။ Haven Tor ကို စွမ်းအင်တွေ ပေးနေတဲ့ keystone တွေ ပျောက်ဆုံးသွားတယ် ။ မြွေလေး Noodle the Snake နှင့် သူ့ရဲ့ ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်း ပိတုန်းငှက်ကလေး Doodle the Hummingbird တို့က ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ keystone တွေကို ရှာပြီး မှော်ဂိတ်ပေါက်ဝမှာ သွားထားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါမှသာ Haven Tor က တဖန် ငြိမ်းချမ်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရုတ္တိဗေဒ အခြေခံ ထားတဲ့ puzzle platform ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကစားသူဟာ မြွေတစ်ကောင်အနေနဲ့ စဉ်းစား ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပဟေဠိတွေကို သဘာဝကျကျ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပဟေဠိတွေကို မြွေတစ်ကောင်အနေနဲ့သာဆိုလျှင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဆက်စပ်ဖြေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဆိုပါ ဂိမ်းကတော့ Snake Pass ဆိုတဲ့ puzzle/platformer ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (via Steam) နှင့် Windows 10 အတွက် ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း developer Sumo Digital က ကြေညာလိုက်ပါတယ် ။ မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့မှာ မြောက်အမေရိကတွင်လည်းကောင်း ၊ မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ဥရောပတွင်လည်းကောင်း အသီးသီး ထွက်ရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
PlayStation4version မှာတော့ Snake Pass ဂိမ်းဟာ 4K စနစ်ကို support လုပ်တဲ့အတွက် PlayStation4Pro နှင့် PlayStation4မှာ ရုပ်ထွက်ကို အသေးစိတ် တိုးမြင့်ထားသဖြင့် ရုပ်ထွက် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ HDR စနစ်နဲ့ frame rate မြင့်မြင့် ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Xbox One version မှာ Xbox Play Anywhere စနစ်ကို support လုပ်တဲ့အတွက် Xbox One version ဝယ်ပါက Windows 10 version အတွက်ပါ အခမဲ့ ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ထို့အတူ saves တွေ achievements တွေနှင့် game add-ons တွေ စတဲ့ data တွေကို Xbox One နှင့် Windows 10 မှာပါ အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်ကာ ရယူ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Switch အတွက်တော့ Snake Pass ဂိမ်းကို TV mode, Handhled mode, နှင့် Tabletop mode တွေမှာ ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Joy-Con နှင့် Switch Pro Controller ကိုလည်း support လုပ်တဲ့အတွက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Steam Link => http://store.steampowered.com/app/544330/
သငျဟာ မွှတေဈကောငျ ဖွဈခဲ့လြှငျ အခကျအခဲတှကေို ဘယျလိုကြျောလှားမလဲ?
ငွိမျးခမျြးလှတဲ့ Haven Tor ကွီးဟာ ထူးဆနျးတဲ့အရာတှရေဲ့ နှောငျ့ယှကျခွငျးခံရပွီး ဂဟေစနဈ ပကျြယှငျးသှားပါတယျ ။ Haven Tor ကို စှမျးအငျတှေ ပေးနတေဲ့ keystone တှေ ပြောကျဆုံးသှားတယျ ။ မွှလေေး Noodle the Snake နှငျ့ သူ့ရဲ့ ခငျမငျရတဲ့ သူငယျခငျြး ပိတုနျးငှကျကလေး Doodle the Hummingbird တို့က ပြောကျဆုံးနတေဲ့ keystone တှကေို ရှာပွီး မှျောဂိတျပေါကျဝမှာ သှားထားပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ဒါမှသာ Haven Tor က တဖနျ ငွိမျးခမျြးလာမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ရုတ်တိဗဒေ အခွခေံ ထားတဲ့ puzzle platform ဂိမျးတဈခုဖွဈပွီး ကစားသူဟာ မွှတေဈကောငျအနနေဲ့ စဉျးစား ကစားရမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ပဟဠေိတှကေို သဘာဝကကြ ဖနျတီးထားတာ ဖွဈပွီး အဆိုပါ ပဟဠေိတှကေို မွှတေဈကောငျအနနေဲ့သာဆိုလြှငျ ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ဆကျစပျဖွရှေငျးရမှာ ဖွဈပါတယျ ။
အဆိုပါ ဂိမျးကတော့ Snake Pass ဆိုတဲ့ puzzle/platformer ဂိမျးတဈခု ဖွဈပွီး PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC (via Steam) နှငျ့ Windows 10 အတှကျ ထှကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈကွောငျး developer Sumo Digital က ကွညောလိုကျပါတယျ ။ မတျလ ၂၈ ရကျနမှေ့ာ မွောကျအမရေိကတှငျလညျးကောငျး ၊ မတျလ ၂၉ ရကျနမှေ့ာ ဥရောပတှငျလညျးကောငျး အသီးသီး ထှကျရှိလာတော့မှာ ဖွဈပါတယျ ။
PlayStation4version မှာတော့ Snake Pass ဂိမျးဟာ 4K စနဈကို support လုပျတဲ့အတှကျ PlayStation4Pro နှငျ့ PlayStation4မှာ ရုပျထှကျကို အသေးစိတျ တိုးမွငျ့ထားသဖွငျ့ ရုပျထှကျ ကွညျလငျပွတျသားစှာ HDR စနဈနဲ့ frame rate မွငျ့မွငျ့ ကစားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Xbox One version မှာ Xbox Play Anywhere စနဈကို support လုပျတဲ့အတှကျ Xbox One version ဝယျပါက Windows 10 version အတှကျပါ အခမဲ့ ရရှိနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ ထို့အတူ saves တှေ achievements တှနှေငျ့ game add-ons တှေ စတဲ့ data တှကေို Xbox One နှငျ့ Windows 10 မှာပါ အပွနျအလှနျ ခြိတျဆကျကာ ရယူ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။
Switch အတှကျတော့ Snake Pass ဂိမျးကို TV mode, Handhled mode, နှငျ့ Tabletop mode တှမှော ကစားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။ Joy-Con နှငျ့ Switch Pro Controller ကိုလညျး support လုပျတဲ့အတှကျ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ ။